Imbali yenkululeko yentetho eUnited States
Imiba Inkululeko Yokuthetha
Inkululeko Yentetho eUnited States
"Ukuba inkululeko yokuthetha iyasuswa," uGeorge Washington watshela iqela lamagosa empi ngo-1783, "ke sisidenge kwaye siluthule singathi sikhokelwa, njengezimvu ekuxhelweni." I-United States ayizange ihlale igcinwe inkululeko yokuthetha (funda imbali yam engumzekelo we-American censorship malunga nokunye), kodwa isithethe senkulumo yamahhala sele sibonakaliswe kwaye sichaswa ngeenkulungwane zemfazwe, iinguqu zenkcubeko kunye nemingeni yomthetho.
Vicm / Getty Izithombe
Ukulandela isiphakamiso sikaTomas Jefferson, uJames Madison ugcina inqaku leBhili yamaLungelo, okubandakanya ukulungiswa kokuQala kuMgaqo -siseko wase-US. Kulo mbono, iSilungiso sokuQala sikhusela ilungelo lokuthetha ngentetho, ukucinezela, ukudibanisa, kunye nenkululeko yokulungisa izikhalazo ngesibheno; ekusebenzeni, umsebenzi wayo ufuziselo kude kube yiSigqibo seNkundla ePhakamileyo sase - US eGitlow v. eNew York (1925).
Ukukhathazeka ngabagxeki bokulawula kwakhe, uMongameli uJohn Adams uphumelela ngokunyanzela ukuhamba kwesiganeko sokuHlaliswa koMdaka kunye nokuBikela. UMthetho wokuSondeza, ngokukodwa, iithagethi abalandeli be-Thomas Jefferson ngokumisela ukugxeka okungenziwa kumongameli. UJefferson uza kuphumelela ukhetho lwongameli luka-1800 nanoma kunjalo, umthetho waphela, kwaye i-John Adams 'Federal Party Party ayiphinde iphinde ibambe uongameli.
Umthetho we-Comstock Act we-1873 unikezela iofisi yeposi ukuba negunya lokujonga i-mail enezinto ezihlazo, "ukuhlambalaza, kunye / okanye ukukhwabanisa." Umthetho usetyenziswa ngokukodwa ukujolisa ulwazi malunga nokukhulelwa.
I-Illinois, iPennsylvania, kunye neSouth Dakota ziba ngowokuqala ukuvuna ngokusemthethweni ukutshatyalaliswa kweflegi yase-US. INkundla ePhakamileyo iya kufikelela ekufunyaneni ukukhutshwa kweflegi ngokungahambisani nomgaqo-nkqubo emva kwekhulu leminyaka kamva, eTexas v. Johnson (1989).
UMthetho wokuLawulwa kowe-1918 ujolise kuma-anarchists, intlalo-ntsapho kunye namanye ama-activist ase-left-wing aphikisana nokubandakanyeka kwe-US kwiMfazwe Yehlabathi I. Ingqungquthela, kunye nemozulu jikelele yokunyanzeliswa komthetho owangqongileyo, ibonisa ukuba ngowona mfutshane u-United States uye wafika ukuthobela umgaqo-nkqubo welizwe loorhulumente.
Umthetho wokuBhaliswa kwabaMnyama we-1940 (obizwa ngokuba nguSmith Act emva koxhasayo, u-Howard Smith waseVirginia) ujolise nabani na owakhuthaza ukuba urhulumente waseUnited States ahluthwe okanye athatyathwe ngenye indawo (oko, njengoko kwakunjalo ngexesha leMfazwe Yehlabathi I, ama-pacifists asekhohlo) - kwaye ifuna ukuba bonke ababhalisi abadala abangabemi bemi-arhente karhulumente ukubeka iliso. INkundla Ephakamileyo kamva yanciphisa uMthetho wamaSmith kunye nezigqibo zayo ngo-1957 kwiYates v. E-United States naseWatkins v. EUnited States .
Kwi- Chaplinsky v. E-United States (1942), iNkundla ePhakamileyo yakha "imfundiso yokulwa" ngokuchaza ukuba imithetho ethintela ulwimi oluzondayo okanye oluhlambalaza, ngokucacileyo lujoliswe ekuvuseni ukunyanzeliswa kwezobudlova, akuyikuphulaphula isiHlomelo sokuQala.
KwiTinker v. Des Moines , umzekelo apho abafundi bahlawuliswa ngokugqoka iimbambo ezimnyama ngokubhikisana neMfazwe yaseVietnam, iNkundla ePhakamileyo ibanjwe ukuba abafundi besikolo nakwiyunivesithi bafumana ukulungiswa kokuqala kwenkululeko yokuthetha.
IWashington Post iqala ukupapasha i-Pentagon Papers, ingxelo evulekileyo ye-US Department of Defense ingxelo ebizwa ngokuba yi -United States-Vietnam Relations, ngo-1945-1967 , eyabonakalisa ukungathembeki kunye neentloni ezithintekayo kumgaqo-nkqubo welizwe langaphandle kwi-Rhulumente wase-US. URhulumente wenza imizamo emininzi yokunciphisa ukupapashwa kwexwebhu, konke ekugqibeleni kwehluleka.
E- Miller v. California , iNkundla ePhakamileyo ibeka umgangatho ongcolileyo obizwa ngokuba yi-Miller test.
KwiCCC v. Pacifica , iNkundla Ephakamileyo inika i-Federal Communications Commission igunya lokunxibelelanisa amanqaku omxholo wokungabonakali.
ICongress idlula uMthetho woBuchule weNxibelelwano, umthetho we-federal ojoliswe ekusebenziseni izithintelo zokungafanelekanga kwi-intanethi njengomqobo wokuthintela umthetho. INkundla ePhakamileyo iyawaphula umthetho kamva kwiReno v. ACLU .
Inkululeko ye-Press eMelika
I-10 ephezulu "Eyona nto ibalulekileyo"
Uvavanyo lweMiller - Ukuchaza ukuhlaselwa
Yintoni ukuHlanganisa uLuntu?
Kutheni Iziganeko ZamaProtestanti AziyiNkunkuma yexesha
6 Inkulu Inkundla Ephakamileyo ye-Intsholo yase-US
Inkululeko Yombutho e-United States
Kutheni Sisidinga Ukuthetha Ngokuphathelele Inkululeko Yokuthetha?
Ukubhukuda kukaBarack Obama 2004 Ingxoxo yeDemocratic Speech
I-Federal Marijuana Laws kwi-Pot-Legal States States
Ubume bembali ye-History of Sexuality
Ukuhlaselwa kweWarsaw Ghetto
I-Scarlet Oak, i-Top 100 yesiqhelo somthi eNyakatho Melika
Izizathu ezili-10 zokukhetha iMfundo ye-Intanethi
U-Elite Bass Angler uvumelekile kwi-Guntersville
I-Biography kaFrederick Omkhulu, uKumkani wasePrussia
ImiSebenzi yoLwazi lweNkxaso yamaMama yoLwazi kwiClassi
Imvelaphi yeembali yeSanta Claus kwiiNtlobo ezahlukeneyo
Iingoma ezi-Best Best Breakup Of All Time
Ukuguquka kweMerika: iMfazwe yasePrinceton
Umsebenzi we-PHP I -_string ()
ZoLimo kunye neFama yokuHlaziya
Indlela yokwenza iAlgebra Iingxaki zeLizwi
IMigqaliselo yeGalofu kwiSiqalo
I-Maquiladoras: IziMveliso zaseMexican Factory Plants ze-US Market
Imiba Yembali Yemizalwane Yokuphepha
Inani leeAthi eZulwini
Imbali yoBugcisa: U-Anarchism kunye noBugcisa be-Anarchist
IsiLungiso sesisithandathu: Umbhalo, iMvelaphi, kunye nentsingiselo
Ukubulawa kukaMongameli William McKinley
Ukubuyela emuva kwi-NBA
I-Top 10 e-Free Best Web Humor Apps
Indlela yokuphuca umdwebo oyingqayizivele ukusuka kwi-Idea
Uluphi ulwimi loLwazi?
I-Biography kunye neProfayili kaConor McGregor